नोभेम्बर 13, 2018 नोभेम्बर 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments सिस्नु
सिस्नु नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्र तथा उपत्यकामा पाइने पोल्ने हरियो झार हो । यसमा औषधिय गुण रहेको हुन्छ र उमालेर खान सकिन्छ । यसमा हुने भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन डी, फलाम, पोटासियम, म्यागानिज, क्याल्सियम जस्ता पौष्टिक पदार्थहरु पाइन्छ । यसमा २५% सम्म् प्रोटिन हुन्छ त्यसैले यो शाकाहरीहरूको लागि अति उत्तम भोजन हो । सामान्यतया यसलाई पकाएर तरकारीको रुपमा पनि खाने गरिए तापनि मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदाबारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । सिस्नुलाई हरियो सागका रुपमा, सुकाएर वा पिँधेर धुलो बनाई सुपका रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सिस्नुले स्वास्थ्यमा पुर्याउने केही फाइदाहरुलाई तल उल्लेख गरिएको छ :
१. सिस्नुमा पोषणको भीषण योग हुन्छ । भिटामिन, मिनरल, बेटा कारोटेन, पोटासियम, आइरन, क्लोरोफिल र जिङ्क यसमा भएका हुनाले शरीरमा लाग्ने धेरै प्रकारका रोगहरुसँग सिस्नो सधैँ नै सो भिडिरहेको हुन्छ ।
२. महिलाहरुका लागि सिस्नु एकदमै उपायोगी हुन्छ किनभने यसमा पर्याप्त फलाम तत्त्व हुन्छ जसले रक्तअल्पता र कमजोरी हटाउन सहयोग गर्छ । यसले कलेजो र महिलाको हर्मोनको संरक्षण गर्न सहयोग पु-याउँछ ।
३. यतिमात्र होइन यसले गर्भिणी महिलाको पेटको बच्चालाई मजबुत पार्न र रक्तश्राव रोक्नस हयोग गर्छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? यसले त महिलाको दूध उत्पादन र छिटै रजनोवृत्ति हुनबाट समेत रोक्छ । सिस्नु लाई ‘हर्बल टनिक्स’हरुमा महिलाहरूको योनीमा आउने बिबिरा हटाउन र मासिक धर्म नियमत होस् भन्ने प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
७. बर्खे ज्वरोमा समेत सिस्नु को सेवनले लाभ पु-याउँछ । यसका लागि सिस्नोको सुप उपयोगी हुने डाक्टरहरुको सल्लाह छ ।
८. अपचमा पनि सिस्नु सेवन लाभकारी छ । यसमा रहेको रेसाले आन्द्रामा अड्केका बिकारलाई सहजै तानेर मलद्वारतर्फ खिच्छ ।
९. शरीरका अङ्गहरूमा अनेक कारणले भएको दुखाईमा सिस्नुको सेवनले आराम दिन्छ । त्यस्तै हड्डी र जोर्नीको दुखाई तथा शरीरमा आएका बिबिराहरु हटाउनमा समेत यसको भूमिका रहन्छ ।
← सिस्नु खानुका फाइदै फाइदाहरु
ज्योतिषशास्त्र अनुसार यी ४ राशि भएका मनिसले कहिले पनि अरुलाई धोका दिँदैनन् →
फ्रेवुअरी 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक 28
मार्च 9, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1